Ku Deeq Online - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Ku-deeqiddaadu waa maal-gelin lagu sameeyo caafimaadka bukaannadayada iyo firfircoonida bulshadeenna.
Xarunta Caafimaadka Sadler waxay kaaga mahadcelinaysaa taageerada deeqsinimada leh ee aad siiso!
Waad ku mahadsan tahay, waxaan awoodnaa inaan horumarino caafimaadka bulshadeena anagoo bixinayna daryeel loo dhan yahay, tayo sare leh, iyo naxariis leh – hadafkeena. Waad ku mahadsan tahay inaad gacan ka geysato dhisidda nolol caafimaad leh ku dhawaad 10,000 bukaan oo Xarunta Caafimaadka Sadler ah.
Deeqsinnimadaada waa inoo muhiim – hadyad kastaa waa muhiim. Waxaan noqon doonaa kuwo ku dadaala oo lala xisaabtami doono sida wakiillada wanaagsan ee taageerada maaliyadeed.
Ku dar qadarka tabarucaada gaarka ah halkan.
Sideed u doorbidi lahayd in deeqdaada lagu isticmaalo?
Dooro...Meesha baahida ugu badan tahay.Sanduuqa Khayriga ahDiyaar…Deji…Ololaha Kobaca.
Hibada sharafta ama xusuusta
Xarunta Caafimaadka Sadler waa urur canshuur dhaaf ah oo ay raacaan xeerarka IRS. Diiwaangelinta rasmiga ah iyo macluumaadka maaliyadeed waxaa laga yaabaa in laga helo Waaxda Gobolka ee Pennsylvania iyadoo la wacayo lacag la'aan gudaha Pennsylvania, 1-800-732-0999. Diiwaangelintu ma jeedinayso taageero.
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Siyaabaha wax loo bixiyo – Qalbi u yeelo Sadler! » Ku Deeq Online